Abuur Mawduucyada Mobilada leh WPtouch Pro | Martech Zone
Monday, August 1, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Jenn Lisak Golding
Adduunyada dhaqsaha badan u socda, waxaa muhiim ah in bartaada internetka lagu hagaajiyo dhammaan qalabka moobiilka, oo ay ku jiraan taleefannada iyo kiniiniyada. Sida laga soo xigtay dhawaan infographic soo saaray Tag Microsoft, Isticmaalka internetka mobilada ayaa la wareegi doona isticmaalka desktop sanadka markuu yahay 2014. Baahnayn in la sheego, barta mobiladaadu waa mid kamid ah hantidaada suuq geynta aasaasiga ah ee dunida maanta.
WPtouch Pro waa kumbuyuutar WordPress ah oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u abuurto oo aad awood ugu yeelatid mawduuc moobiil hodan ah oo loogu talagalay boggaaga. Fidinta waxay bixisaa qaab aad ku abuuri karto mowduuc la habeeyay oo ka duwan goobta loogu talagalay desktop-ka. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay la shaqeyso waxyaabo kale oo badan oo laga faa'iideysto astaamaha 'WordPress'.
WPtouch Pro waxay taageertaa mowduucyada iPhones, iPads, Android, Palm OS, Blackberry, iyo Samsung, oo leh astaamo sida menus buuxa, xayeysiin, iyo tirakoob. Waxaan horay u soo aragnay boodbooyin booqashooyinkeena moobiil tan iyo markii aan hirgelinay WPtouch Pro - yaa rabin taas?